အာဇာနည်မျိုးသေရိုးမရှိ: အနောက်တံ ခါးခံတပ်ကြီးကို ဖွင့်ပေးလိုက်တော့မယ် ဆိုရင် ဘာတွေဖြစ်လာနိုင်မလဲ???
အနောက်တံ ခါးခံတပ်ကြီးကို ဖွင့်ပေးလိုက်တော့မယ် ဆိုရင် ဘာတွေဖြစ်လာနိုင်မလဲ???
နှစ်ပေါင်းများစွာ တောင့်ခံလာခဲ့တဲ့ အနောက်ရိုးမရဲ့ခံစစ်မှုး ရခိုင်တိုင်းရင်းသားတွေက အနောက်တံ
ခါးခံတပ်ကြီးကို ဖွင့်ပေးလိုက်တော့မယ် ဆိုရင် ... အနောက်ဘက်မြေကို ထားခဲ့ပစ်လိုက်တော့မယ်
ဆိုရင် ... အနောက်ဘက်မှာ နှစ်ပေါင်းများစွာ သူတို့တားဆီးဟန့်တားထားခဲ့တဲ့ ဘင်္ဂလီတွေကို
မတားဆီး မထိန်းချုပ်တော့ပဲ လွတ်လပ်စွာ သွားလာခွင့် ပြည်တွင်းကိ
ုလွတ်လပ်စွာခိုးဝင်ခွင့်တွေ ပေးလိုက်တော့မယ်ဆိုရင် ... ဘာတွေဖြစ်လာနိုင်မလဲ???
ကြတဲ့ တိုင်းရင်းသားတွေ သဘောတူနိုင်မလား??? လက်ခံနိုင်မလား???
ရခိုင်တိုင်းရင်းသားတွေရဲ့ ရင်ဘတ်ထဲက ခံစားချက်တွေ အသဲနှလုံးထဲက နာကျင်ခံစားမှုတွေ နှစ်
ပေါင်းများစွာ မျိုသိပ်လာတဲ့ ၀မ်းနည်းကြေကွဲမှုတွေကို ကိုယ်တိုင်မေးမြန်းနားထောင်ခဲ့ပြီး ပြန်ရေးပေး
"ကျနော်တို့မှာ ရွေးချယ်စရာလမ်း ၂ လမ်းပဲ ရှိတော့တယ် .. ပထမ တစ်လမ်းက ရခိုင်ပြည်ကို ဆက်
ပြီးမကာကွယ်တော့ဘူး အားလုံးစွန့်လွှတ်လိုက်မယ် .. ရခိုင်တွေအားလုံး ရန်ကုန်တို့ မန္တလေးတို့လို
နေရာတွေကို ပြောင်းမယ် မိန်းမတွေ ခလေးတွေကို လုံခြုံစိတ်ချရအောင်စီစဉ်ပေးပြီး ယောကျာ်းတွေ
ရခိုင်တပ်ထဲ ၀င်တော့မယ် .. ကျနော်တို့မှာ အားကိုးစရာလူမရှိတော့ဘူး .. ဆက်ပြီးတော့လဲ တောင့်
ခံ မနေနိုင်တော့ဘူး .. နှစ်ပေါင်းများစွာ အသက်တွေ သွေးတွေ ပေးဆပ်ပြီး တောင့်ခံလာခဲ့တာလဲ
အလကားပဲ .. အစိုးရကလဲ ကျနော်တို့ဘက်မှာမရှိဘူး .. ကျနော်တို့ကို အခွင့်အရေးပေးကြည့်လိုက်
ပါလား .. မင်းတို့ရခိုင်ပြည်ကို မင်းတို့ကာကွယ်ကွာ လို့သာ ပြောကြည့်လိုက် .. ဘယ်သူ့အကူအညီမှ
မယူပဲ ကျနော်တို့ ဒီကောင်တွေကို ကျနော်တို့ရခိုင်တိုင်းရင်းသားတွေချည်းပဲ တိုက်ထုတ်ပစ်မယ်
သွေးချောင်းစီးသွားပစေ ရအောင်တိုက်ထုတ်ပစ်မယ် .. အခုတော့ အဲ့လိုမဟုတ်ဘူး ဒီကောင်တွေ
ကို လက်နက်တွေနဲ့မိတယ် ဒီကောင်တွေရခိုင်တိုင်းရင်းသားတွေကို အကြမ်းဖက်တယ် ရက်ရက်
စက်စက်သတ်ဖြတ်တယ် ဒီကောင်တွေရခိုင်ကိုဖဲ့ယူဖို့ကြိုးစားနေတယ် ဒါတွေအားလုံးကို သိသိကြီး
နဲ့ အခုချိန်ထိ ထိရောက်တဲ့အရေးယူမှုတွေ ထိရောက်တဲ့အကာအကွယ်တွေ အစိုးရက မလုပ်ပေးဘူး
ဖမ်းထားတဲ့ ကုလားတွေကိုတောင်ပြန်လွှတ်ပေးတယ် .. ရခိုင်တွေကျတော့ အခြေအနေအကြောင်း
ကြောင်းကြောင့် ညမထွက်ရအမိန့်ကိုချိုးဖေါက်မိတဲ့ သူတွေကိုတောင် ထောင်ချတယ် .. ဒီကောင်တွေက ဒုက္ခသည်စခန်းမှာ လုံခြုံဘေးကင်းစွာနဲ့ နေပြီး နိုင်ငံခြားအကူအညီနဲ့စားသောက်နေ
ရတာဗျ .. ကျနော်တို့ ရခိုင်တွေက ဘာအလုပ်မှမလုပ်နိုင်တော့ပဲ ဒုက္ခရောက်နေကြရတာ ဘယ်သူမှ
မသိဘူး .. ဖားရှာ ငါးရှာတောင်မထွက်ရဲတဲ့ဘ၀ လယ်တွေ ယာတွေလုပ်ဖို့ကျတော့လဲ ကုလားတွေ
ချောင်းသတ်နေလို့ မလုပ်ရဲတဲ့ဘ၀ .. ကျနော်တို့ဆက်ပြီးမနေနိုင်တော့ဘူး ဆက်ပြီးသည်းမခံနိုင်တော့ဘူး ဒါကြောင့် လမ်းနှစ်လမ်းရွေးချယ်ထားတယ် ဒါက ပထမလမ်း နောက်
တစ်လမ်းက နိုင်ငံတကာက လူ့အခွင့်အရေးဆိုပြီး လက်ခံဖို့အော်နေကြတဲ့ ဒီဘင်္ဂလီတွေကို အစိုးရ
ကလဲ လူ့အခွင့်အရေးအရ လက်ခံပေးတော့မယ်ဆိုရင် ကောင်းပြီ ကျနော်တို့ကလဲ ဖွင့်ပေးလိုက်
တော့မယ် .. ကျနော်တို့ အမ်းတို့ တောင်ကုတ်တို့ကို လဲ ကုလားတွေကိုတားဆီးဟန့်တားတာမလုပ်
တော့ပဲ အားလုံးကို ဖွင့်ပေးခိုင်းလိုက်မယ် .. ဒီကောင်တွေ ၀င်ကြလေ ပြည်တွင်းထဲကို ကြိုက်သလို
သွား .. ကြိုက်တဲ့နည်းလမ်းနဲ့ဝင် .. ကျနော်တို့က လူ့အခွင့်အရေးအတိုင်းပဲ ဒီကောင်တွေကိုမတား
တော့ဘူး .. ရန်ကုန်သွားမလား မန္တလေးသွားမလား တောင်ကြီးသွားမလား မော်လမြိုင်သွားမလား
ကြိုက်တဲ့နေရာသွား .. တနိုင်ငံလုံးကို ကြိုက်တဲ့နည်းနဲ့ကြိုက်တဲ့နေရာသွားကြပစေ .. လွတ်လပ်စွာ
သွားလာခွင့်ပြုလိုက်တော့မယ် .. ဒါမှ ဒီကောင်တွေရခိုင်မှာ ပြုံမနေတော့ပဲ တနိုင်ငံလုံးကို ဖြန့်ကျက်
ရောက်သွားမှာ .. ရခိုင်တွေချည်းပဲ ဘင်္ဂလီတွေကိုလက်ခံထားရမယ် ရခိုင်တွေချည်းပဲ ဘင်္ဂလီတွေ
ရဲ့ရန်ကို အံတုနေရမယ်ဆိုရင် မတရားဘူးလေ .. အကုန်လုံးမျှဝေခံစားကြပေါ့ဗျာ .. တိုင်းနဲ့ပြည်နယ်
အသီးသီးက ကျန်တိုင်းရင်းသားတွေလဲမျှဝေခံစားလိုက်ကြပေါ့ .. အဲ့ဒီ့အချိန်ကျရင် ဒီကောင်တွေ တနိုင်ငံလုံးကို ပြန့်နှံ့သွားခဲ့ရင် ဒီကောင်တွေရဲ့မျိုးပွါးမှုနှုန်းနဲ့နှစ်အနည်းငယ်အတွင်းမှာပဲ ဒီကောင်တွေလူဦးရေတွေထိန်းချုပ်လို့မနိုင်အောင်တိုးပွါးလာလိမ့်မယ် ဒီကောင်တွေလူဦးရေများ ပြီဆိုတာနဲ့ အခု မောင်တော၊ဘူးသီးတောင်၊စစ်တွေကလို အဖြစ်မျိုးတွေကြုံလာလိမ့်မယ် အဲ့ဒီ့အချိန် ကျမှ ကျနော်တို့ရခိုင်တိုင်းရင်းသားတွေရဲ့ဘ၀ကိုနားလည်လာလိမ့်မယ် ကိုယ်ချင်းစာတတ်လာလိမ့်မယ် ... ဒါကျနော်တို့ ရွေးချယ်ထားတဲ့လမ်းတွေပဲ .. အစိုးရနဲ့ကျန်တိုင်းရင်းသားညီအကိုတွေက ကျနော်တို့ဘက်မှာမရှိတော့ဘူးဆိုရင် ကျနော်
တို့ အဲ့ဒီ့လမ်းကြောင်း ၂ ခုထဲက တခုကို ကျိန်းသေရွေးရတော့မယ် .. အားလုံးတိုင်ပင်ပြီးပြီ"
အဲ့ဒါ ရခိုင်တိုင်းရင်းသားတွေရဲ့ရင်တွင်းစကားသံတွေပါပဲ .. ကျန်တိုင်းရင်းသားညီအကိုတွေ ကိုယ်
ချင်းစာနိုင်ကြပါစေ .. နားလည်နိုင်ကြပါစေ .. စဉ်းစားကြည့်လိုက်ကြပါ .. ကျနော်ဆိုရင် ရန်ကုန်မှာ
နေတဲ့လူတစ်ယောက် .. ရခိုင်တိုင်းရင်းသားတွေသာ အနောက်တံခါးကိုမကာကွယ်တော့ဘူး ဖွင့်ပေး
လိုက်တော့မယ်ဆိုရင် ဘင်္ဂလီတွေ ကျနော်တို့ရန်ကုန်ကိုအများကြီးဝင်လာစရာတောင်မလိုဘူး ..
နဂိုရှိပြီးသား ရန်ကုန်ကမူဆလင်တွေနဲ့ပေါင်းလိုက် သူတို့ရဲ့မျိုးပွါးမှုနှုန်းကို တွက်လိုက်ရင် နှစ်အနည်းငယ်အတွင်းမှာပဲ ရန်ကုန်က မောင်တောလိုဖြစ်သွားလိမ့်မယ် ...
အဲ့လိုပဲ မော်လမြိုင် ဆိုရင်လဲ မူဆလင်တွေအများကြီးရှိတဲ့မြို့ ... အနောက်ဘက်က ဘင်္ဂလီတွေသာ
မော်လမြိုင်ထပ်ရောက်လာမယ်ဆိုရင် မော်လမြိုင်လဲနှစ်အနည်းငယ်အတွင်းမှာပဲ မောင်တောလို
ဖြစ်သွားမှာပဲ .. မြန်မာနိုင်ငံရဲ့နေရာတော်တော်များများ မောင်တောလိုဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ဆိုတာတော့
သံသယဖြစ်စရာမလိုပါဘူး ... အဲ့ဒီ့တော့ ကျနော်တို့ကျန်တဲ့တိုင်းရင်းသားတွေ ဘာဆက်လုပ်ကြမလဲ
ရခိုင်တိုင်းရင်းသားတွေ ရင်ထဲကခံစားချက်တွေ ဒဏ်ရာတွေကို ကျနော်တို့ဘယ်လိုဖြေဖျောက်ပေး
ကြမလဲ ... ကျနော့အမြင်ကတော့ ရခိုင်တိုင်းရင်းသားတွေရဲ့စိတ်ဒဏ်ရာကို ဖြေဖျောက်နိုင်ဖို့အတွက်
ကျနော်တို့ကျန်တိုင်းရင်းသားတွေကလဲ တစိတ်တည်းတ၀မ်းတည်းရှိတယ်ဆိုတာကို အပြောနဲ့မလုပ်
ပဲ လက်တွေ့မားမားမတ်မတ်ရပ်ပြီး သက်သေပြလိုက်မယ်ဆိုရင် .. ရခိုင်ပြည်ကြီးနဲ့ရခိုင်တိုင်းရင်း
သားတွေကို ကျန်တိုင်းရင်းသားတွေက ၀ိုင်းဝန်းကူညီကာကွယ်ပေးကြမယ်ဆိုရင် ကျနော်တို့ညီအကို
ရခိုင်တိုင်းရင်းသားတွေရဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာအမြစ်တွယ်နေခဲ့တဲ့ အထီးကျန်ခြင်းတွေ နှစ်ပေါင်းများစွာခံ
စားခဲ့ရတဲ့ နာကျင်ကြေကွဲမှုတွေကို အမြစ်ပြတ်အောင်ကုစားပေးနိုင်လိမ့်မယ်လို့ထင်မြင်မိပါတယ်
ပေးပို့တင်ပြသူ အာလူးလေး at 5:08 PM Email This BlogThis! Share to Twitter Share to Facebook